I-Ediciones Babylon inelayisense ngaphansi kweFairy Quest | Izincwadi Zamanje
Lapho sengizifundile lezi zindaba, iqiniso ukuthi angikwazi ukuphika ukuthi zingimangazile. Ukuthi ummemezeli omncane uthanda Izinhlelo zeBabiloni yenziwe ngelayisense ye- Imfuno yenganekwane, esengikhulumile ngayo Izindaba Zamahlaya Izikhathi ezimbalwa, kuyamangaza ukungangeni endlini yokushicilela enamasiko amaningi namathuba, futhi kuyajabulisa ukubona ukuthi izindlu ezincane zokushicilela zinethuba lokushicilela imisebenzi yabalobi abadumile abenza izinto kahle, njengoba ngicabanga ukuthi bazokwenza benze izinto ezizokwenziwa ngale ndlela enhle. Ngikushiya nombiko wabezindaba owenziwe ngumhleli uqobo:
Umlingo ohlanganisiwe kaHumberto Ramos, Paul Jenkins noLeonardo Olea ufika eSpain uvela esandleni sika Izinhlelo zeBabiloni
- IFairy Quest, umsebenzi ohlanganyelwe wababhali bamahlaya abathathu abafanele kakhulu namuhla, uzoshicilelwa eSpain ngu-Ediciones Babylon
- Umsebenzi unengqayizivele yokuthi ushicilelwe e-US ngaphandle kwabashicileli abakhulu, ukubheja kukaPaul Jenkins noHumberto Ramos
- IFairy Quest, ilayisense yokuqala ye-Ediciones Babylon, izokhishwa ngoNovemba ozayo
Izinhlelo zeBabiloni, indlu yokushicilela yaseValencian ese-Ontinyent futhi enomdlandla ngobuchwepheshe obusha kanye nethalente labalobi abakhuluma iSpanishi, izoshicilela kuyo yonke inyanga kaNovemba ukuthi yini ilayisense yayo yokuqala: i-comic Fairy Quest, umsebenzi ohlangene wombhali wesikrini waseBrithani uPaul Jenkins Umdwebi wamakhathuni waseMexico uHumberto Ramos kanye noLeonardo Olea waseMexico, ophethe ukufaka umbala kulo msebenzi.
IFairy Quest, isaga elinamavolumu amane, ngumdlalo wamahlaya owaziwa kabanzi emhlabeni wonke ngekhwalithi yomsebenzi owenziwe ngababhali bawo abathathu.
Ngokuya ngezinganekwane nezinganekwane zendabuko ezaziwa ngabancane nabadala, iFairy Quest ibuza ukuthi kuzokwenzekani uma abalingiswa abathandwa njengeLittle Red Riding Hood, iBig Bad Wolf, uPeter Pan noma uCinderella, bekhathele ukuphindaphinda indaba efanayo kaninginingi, ulangazelele inkululeko futhi uzama ukuphunyuka kumashiqela uMnuz Grimm, olawula konke okwenzeka eForest of Fables, ikhaya labo bonke abalingiswa.
Icebo lakhe lobuqili livela engqondweni kaPaul Jenkins, umbhali wemibhalo yamahlaya eminingi evela kuMarvel universe nakuDDC, futhi owine umklomelo ohlonishwayo we-Eisner Prize, othathwa njengobaluleke kakhulu emkhakheni wamahlaya, futhi kwesinye isikhathi abizwa nge- "The Oscar of amahlaya ".
Ngokwengxenye yayo, isigaba semidwebo esimangazayo sinomugqa ongaqondakali kaHumberto Ramos, umculi waseMexico okuthi, ngaphezu kokuba ne-resume enkulu, ungomunye wabadwebi bamakhathuni bamanje bezigigaba zeSpiderman esidumile.
Futhi umhlanganyeli ojwayelekile weMarvel, uLeonardo Olea, ubephethe ukunikeza impilo emsebenzini wozakwabo ababili, ngokunikeza umsebenzi umbala ogcina ucacisa umlingo wamahlaya lapho umfundi ezophinde aphuphe futhi, njengoba enza futhi ebuntwaneni bakhe nalezo zinhlamvu ezifanayo.
U-Ediciones Babylon uzoshicilela iFairy Quest ngohlelo olunamakhasi aqinile, lapho abafundi abavela kulo lonke elaseSpain bezokwazi ukujabulela ukusebenza ngokuhlanganyela kwalaba bafundi abathathu bamahlaya. Umshicileli, kuyo yonke le nyanga ka-Okthoba, uzohlinzeka ngemininingwane ethe xaxa ngalokhu kumaphrofayli ayo kumanethiwekhi omphakathi, lapho igcina ukuxhumana njalo nabalandeli bayo nabathandi bamahlaya, ukufunda nobuciko ngokujwayelekile.
Mayelana neBabiloni Editions
Izinhlelo zeBabiloni yindlu yokushicilela encane futhi entsha, ezinze e-Ontinyent (Valencia), ezinikele kubalobi abakhuluma iSpanishi nobuchwepheshe obusha. Ishicilela amanoveli, izindaba ezimfishane namahlaya, ephepheni nasesimweni sedijithali, kanye namaphosta, izikibha nezinto ezahlukahlukene zokuthengisa. Yasungulwa maphakathi no-2010 futhi yonke imisebenzi yayo ingatholakala ku- www.EdicionesBabylon.es.
Imininingwane engaphezulu kweyethu blogUngasilandela futhi Facebook futhi ku Twitter.
Umthombo - Isikhathi sekhekhe
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Izinhlobo » Amahlaya » I-Ediciones Babylon inikwe ilayisense ngaphansi kwelayisense leFairy Quest